साम्राज्ञीका कारण ‘मंगलम’ लाई मिल्ला राहत ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
साम्राज्ञीका कारण ‘मंगलम’ लाई मिल्ला राहत ?
भोली शुक्रवारबाट वर्षको प्रतिक्षीत चलचित्र ‘मंगलम’ देशैभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । बाघ निर्माताको रुपमा चिनिने छविराज ओझाको यो २३ औँ चलचित्र हो ।
‘लज्जा’ बाट नेपाली रजतपटमा भित्रिइएकी अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल चलचित्रकी प्रमुख पात्र हुन् । अभिनेता द्वय पुष्प खड्का र पृथ्वीराज प्रसाइँ पनि प्रमुख भूमिकामा छन् ।
‘मंगलम’ मा युवा पुस्तामाझ सर्वाधिक रुचाइएकी अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको पनि अतिथी भूमिका छ । ट्रेलर र पोष्टरमा निर्माण टिमले दर्शकको ध्यान तान्न उनलाई पनि स्थान दिन छुटाएको छैन । यसकारण चलचित्रप्रति दर्शकको चासो झन् बढेको छ ।
साम्राज्ञीको क्रेज मल्टिप्लेक्स अडियन्समा गज्जब छ । यसकारण उनको थोरै सीन भए पनि चलचित्रले मल्टिप्लेक्स थिएटरमा दर्शकको साथ राम्रो पाउने धेरैले अनुमान लगाएका छन् । यसअघि ‘छविराज ब्यानर’ मा निर्मित चलचित्र सिंगल हल लक्षित हुने गर्दथे ।
‘मंगलम’ को पब्लिसिटीमा अनुहार समेत नदेखाएकी साम्राज्ञीको उपस्थिति चलचित्रमा मात्रै भए पनि निर्माण टिम खुसी छ । ट्रेलरमा उनको भूमिका सस्पेन्स राखिएको छ । तर, गेटअप हेर्दा उनी शिक्षिकाको भूमिकामा हुन सक्ने अडकल गरिएको छ ।
नवल नेपाल निर्देशित चलचित्र ‘मंगलम’ मा विष्णु घिमिरेको छायांकन, दिपक शर्माको संगीत, गोविन्द फुँयालको कथा रहेको छ । चलचित्रको निर्मातामा दिजेन्द्र शाक्य, साकार ओझा र ओम गुरुङ रहेका छन् ।